အခရာမှ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကား (၅) ကား
အကောင်းဆုံး ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကား (၅) ကား
6 Mar 2018 . 4:55 PM
အခုနှစ်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေဆိုရင် ဘောလီးဝုဒ်ကားတွေကို ဟောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေလိုပဲ လူကြိုက်များလာကြပါတယ်။ ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်သမားတွေကလည်း ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို အသေအချာလုပ်လာကြတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ဖျော်ဖြေရေးလည်း ဆန်၊ ပညာလည်း ရကြပါတယ်။ တခြားရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ဘောလီးဝုဒ်ကားတွေက ဇာတ်အိမ်ခိုင်ကြတာပါ။ ဆယ်မိနစ်လောက်သာ ကြည့်လိုက်ရင် မထချင်လောက်အောင် ပရိသတ်တွေကို စွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ကားတွေအထဲကမှ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၅) ကားကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၅။ Munna Bhai M.B.B.S. (2003)
မင်းသားကြီး Sanjay Dutt ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ ဒီကားကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Munna Bhai ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေရပေမယ့် သူ့မိဘတွေကိုတော့ ဆရာဝန်ဖြစ်နေပါပြီလို့ လိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မသိနားမလည်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးကတော့ သားဆရာဝန်အတွက် ပီတိဖြစ်လို့ပေါ့။ သူ့ဖခင်ကြီးဟာ အသိဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ ပြန်တွေ့ပြီး သူ့သားကို ဆရာဝန်မလေးနဲ့ လက်ထပ်ပေးဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ သွားတွေ့တဲ့အခါမှ Munna Bhai ဟာ ဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာဝန်ကြီးက သူ့ဖခင်ကို ပြောလိုက်တော့ အရှက်ရပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ Munna Bhai ဟာ ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့ မသမာနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဆေးကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆရာဝန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပဲ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မေတ္တာတရားကပဲ အဓိကအကျဆုံးဆိုတာ ဖော်ကျူးသွားပါတယ်။ Munna Bhai အဖြစ် မင်းသားကြီး Sanjay Dutt က ပါဝင်ထားပြီး ဒေါက်တာ Suman Asthana အဖြစ် မင်းသမီးချော Gracy Singh က အစွမ်းပြထားပါတယ်။
၄။ Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကိုမှ ကြိုက်ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)’ ကိုတော့ လက်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့။ အချစ်စစ်ဟာ ဘယ်တော့မှ မဖြောင့်ဖြူးဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်။ လန်ဒန်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ လူငယ်နှစ်ယောက်။ ဥရောပတစ်ခွင်ကို ခရီးထွက်ရင်းကနေ သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် Simran Singh ရဲ့ဖခင်က ရှေးရိုးစွဲအဖိုးကြီး။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူ့သမီးကို သူငယ်ချင်းရဲ့သားနဲ့ လက်ထပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားခဲ့တယ်။ သူ့သမီးမှာ တခြားလူနဲ့ သံယောဇဉ်ဖြစ်နေတာကို ရိပ်မိလေတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ပြန်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့သားနဲ့ လက်ထပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ချစ်သူကို မခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Raj Malhotra ကလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လိုက်လာခဲ့တယ်။ ဖခင်နဲ့ ချစ်သူအကြားမှာ လွန်ဆွဲနေတဲ့ Simran Singh ။ အချစ်ကိုပဲ ဦးစားပေးမလား၊ ဖခင်စကားကိုပဲ နားထောင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒီဇာတ်ကားကြီးဟာ ၁၉၉၅ခုနှစ်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီဆု (Filmfare Awards) ကလည်း (၁ဝ) ဆုချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ Raj Malhotra အဖြစ် Shah Rukh Khan က အားဖြည့်ထားပြီး Simran Singh အဖြစ် မင်းသမီးချော Kajol က အစွမ်းပြထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Shah Rukh Khan နဲ့ Kajol တို့ရဲ့နုပျိုတဲ့ရုပ်သွင်ကို ခံစားရမှာပါ။
၃။ Sholay (1975)
မင်းသားကြီး Dharmendra နဲ့ Amitabh Bachchan နဲ့ ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ‘Sholay (1975)’ ဇာတ်ကားကြီးဟာ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ အပြောင်မြောက်ဆုံးရုပ်ရှင်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၇၅ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုပေမယ့် ရိုက်ချက်၊ နောက်ခံတေးဂီတနဲ့ ဆက်တင်အပြင်အဆင်တွေဟာ ဒီနေ့ခေတ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ အတုယူစရာပါ။ နှစ်ကာလကြာမြင့်ပြီဆိုပေမယ့် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်စာရင်းထဲမှာ ‘Sholay (1975)’ က ထိပ်ဆုံးကပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အငြိမ်းစားရဲအရာရှိကြီး Baldev Singh ဟာ သူခိုးနှစ်ယောက်ကို ရှာပေးဖို့ သူ့သူငယ်ချင်းထောင်ပိုင်ကြီးဆီကို အကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူရှာခိုင်းတဲ့ သူခိုးနှစ်ယောက်က Veeru နဲ့ Jai ပါ။ ထောင်ထဲကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ ဘာမထီဇာနည်ဘွား။
ရဲအရာရှိကြီးက လူဆိုးခေါင်းဆောင် Gabbar Singh ကို ဖမ်းပေးဖို့ Veeru နဲ့ Jai ကို အကူညီတောင်းခဲ့တယ်။ ရူပီး ၅သောင်း ဆုကြေးထုတ်ထားတဲ့ Gabbar Singh ကို အရှင်ဖမ်းပေးနိုင်ရင် ထပ်ဆောင်းဆုကြေး ရူပီး ၂သောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။ ‘ငရဲဆိုတာ ချိုနဲ့လား’ လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူခိုးနှစ်ယောက်ကလည်း ရာဇဝင်လူဆိုးကြီးကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အငြိမ်းစားရဲအရာရှိကြီးနဲ့ ရာဇဝင်လူဆိုးကြီးတို့က ဘယ်လိုရန်ညိုးတွေ ရှိခဲ့လဲ။ ရဲအရာရှိကြီးက ဘာဖြစ်လို့ သူခိုးနှစ်ယောက်ကို ခိုင်းခဲ့တာလဲ။ သူခိုးတွေကရော ဘယ်လိုအစွမ်းအစရှိနေလို့လဲ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။ ‘Sholay (1975)’ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အချိန်ဆိုတာ ကုန်လို့ကုန်မှန်းကို သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Veeru အဖြစ် Dharmendra နဲ့ Jai အဖြစ်တော့ မင်းသားကြီး Amitabh Bachchan တို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။
၂။3Idiots (2009)
မိဘနှစ်ပါးဟာ သားသမီးတွေကို ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်စေချင်ကြတယ်၊ အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်စေချင်ကြတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဆရာဝန်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာမှ မဖြစ်ရင်တော့ လူဖြစ်ပဲ ရှုံးသလိုလို ဘဝမှာပဲ မအောင်မြင်တော့သလိုလို မြင်နေတာပါ။ ဒီနေ့ခေတ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း “ငါ့သားက ဆေးကျောင်းတက်နေတာလေ၊ ကျွန်မသမီးလေးက အင်ဂျင်နီယာလောင်းလေး” စသဖြင့် ကြွားလုံးထုတ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ဘဝကို ပုံသွင်းလာကြပါတယ်။
ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ့်အစား သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကိုပဲ ပစ်သွင်းကြတာပါ။ “ငါ့သား၊ ငါ့သမီး အသက်ကြီးလာရင် ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ” လို့ မေးတတ်တဲ့မိဘဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အဓိကထားပြီး ဒါရိုက်တာကြီး Rajkumar Hirani က ‘3 Idiots (2009)’ ကို ပုံဖော်ခဲ့တာပါ။ မိဘဖြစ်စေချင်တဲ့ ဘဝကို ပုံဖော်မလား၊ ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဝါသနာနောက်ကိုပဲ လိုက်မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကသော့ချက်ပါ။ ကျောင်းစာသင်ခန်း အငွေ့အသက်နဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတော့ Aamir Khan ၊ R. Madhavan ၊ Sharman Joshi နဲ့ Kareena Kapoor တို့က အားဖြည့်ထားပါတယ်။
၁။ My Name Is Khan (2010)
အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေကြတာပါပဲ။ အသေခံဗုံးခွဲမှုတွေ၊ မီးရှို့မှုတွေနဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ‘Al-Shabaab’ ၊ ‘Al-Qaeda’ ၊ ‘Taliban’ ၊ ‘ISIS’ နဲ့ ‘Boko Haram’ တို့လို အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ‘My Name Is Khan (2010)’ ဇာတ်ကားမှာတော့ “ကျွန်တော့်နာမည် Khan ပါ။ ကျွန်တော် အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်ပါဘူး” လို့ဆိုလာတဲ့ Rizwan Khan ။ တကယ်ဆို Rizwan Khan က Asperger ဝေဒနာသည်။ (သူတို့တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် မဆက်ဆံနိုင်ပါဘူး၊ ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတဲ့သူတွေပါ။) “လောကမှာ မကောင်းတဲ့ဘာသာဆိုတာ မရှိဘူး၊ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုးပဲရှိတယ် သား” ဒါက သူငယ်ငယ်တုန်းက မိခင်ဆုံးမနေကျစကား။ သူ့မိခင်ကွယ်လွန်တာနဲ့ Rizwan Khan ဟာ Mumbai မြို့ကနေ San Francisco မြို့မှာရှိတဲ့ သူ့ညီရဲ့အိမ်ကို ပြောင်းနေခဲ့တယ်။
ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အမေ Mandira နဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်တော့ သူ့ညီက သဘောမတူခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် Rizwan Khan ကတော့ လက်ထပ်လိုက်တာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက သာယာခဲ့တယ်။ 9/11 အကြမ်းဖက်မှု မဖြစ်ခင်အထိပေါ့။ (၂ဝဝ၁ခုနှစ် စက်တင်လာလ ၉ရက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ (World Trade Center) ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ‘Al-Qaeda’ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင် (Osama bin Laden) ရဲ့ 9/11 လုပ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း ၂၉၉၇ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၆ဝဝဝကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ 9/11 တိုက်ခိုက်မှုဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် အထိနာခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဘီလီယံ (သန်း၁သောင်း) ကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။)
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မူဆလင်အသိုင်းအဝိုင်းဟာ တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ မသင့်မမြတ်ဖြစ်တော့တာပဲ။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့သားလေးဟာ အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ လင်မယားချင်း ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး Rizwan Khan ဟာ အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွင်းခဲ့တယ်။ အမေရိကန်သမ္မတကြီး George W. Bush ဆီကို သွားပြီး “ကျွန်တော့်နာမည် Khan ပါ။ ကျွန်တော် အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ပြောဖို့ပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းကြီးမှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါတော့။
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၅) ကားစာရင်းဟာ စာရေးသူရဲ့အမြင်နဲ့သာ ဖော်ပြလိုက်တာမို့ အကြိုက်ချင်းတူရင်မှ တူမှာပါ။ ဒီစာရင်းမှာ မပါပေမယ့် ‘Lagaan (2001)’ ၊ ‘Swades (2004)’ ၊ ‘Every Child Is Special (2007)’ ၊ ‘PK (2014)’ နဲ့ ‘Dangal (2016)’ တို့လို ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ စာဖတ်သူတွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားက ဘာဖြစ်မလဲ။
အကောငျးဆုံး ဘောလီးဝုဒျဇာတျကား (၅) ကား
အခုနှဈပိုငျးမှာ ရုပျရှငျခဈြသူတှဆေိုရငျ ဘောလီးဝုဒျကားတှကေို ဟောလီးဝုဒျဇာတျကားတှလေိုပဲ လူကွိုကျမြားလာကွပါတယျ။ ဘောလီးဝုဒျရုပျရှငျသမားတှကေလညျး ဇာတျလမျး၊ ဇာတျညှနျးနဲ့ ရိုကျခကျြတှကေို အသအေခြာလုပျလာကွတော့ ရုပျရှငျခဈြသူတှအေတှကျ ဖြျောဖွရေေးလညျး ဆနျ၊ ပညာလညျး ရကွပါတယျ။ တခွားရုပျရှငျနယျပယျတှနေဲ့ မတူတဲ့အခကျြကတော့ ဘောလီးဝုဒျကားတှကေ ဇာတျအိမျခိုငျကွတာပါ။ ဆယျမိနဈလောကျသာ ကွညျ့လိုကျရငျ မထခငျြလောကျအောငျ ပရိသတျတှကေို စှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဘောလီးဝုဒျကားတှအေထဲကမှ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျရတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကား (၅) ကားကို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
မငျးသားကွီး Sanjay Dutt ရဲ့အမာခံပရိသတျတှကေတော့ ဒီကားကို သိကွမယျထငျပါတယျ။ Munna Bhai ဆိုတဲ့ ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျတဈယောကျဟာ ဒုစရိုကျလုပျငနျးတှေ လုပျနရေပမေယျ့ သူ့မိဘတှကေိုတော့ ဆရာဝနျဖွဈနပေါပွီလို့ လိမျထားလိုကျပါတယျ။ မသိနားမလညျတဲ့ မိဘနှဈပါးကတော့ သားဆရာဝနျအတှကျ ပီတိဖွဈလို့ပေါ့။ သူ့ဖခငျကွီးဟာ အသိဆရာဝနျတဈယောကျနဲ့ ပွနျတှပွေီ့း သူ့သားကို ဆရာဝနျမလေးနဲ့ လကျထပျပေးဖို့ ကွံစညျခဲ့ပါတယျ။ သှားတှတေဲ့အခါမှ Munna Bhai ဟာ ဆရာဝနျမဟုတျဘဲ ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျဖွဈကွောငျးကို ဆရာဝနျကွီးက သူ့ဖခငျကို ပွောလိုကျတော့ အရှကျရပွီး အိမျပွနျခဲ့ရပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ Munna Bhai ဟာ ဆေးကြောငျးတကျခှငျ့ရဖို့ မသမာနညျးလမျးတှနေဲ့ ကွိုးစားပါတော့တယျ။ ဆေးကြောငျးရောကျတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာဝနျဖွဈလာမလားဆိုတာ ဖနျသားပွငျပျေါမှာပဲ စောငျ့ကွညျ့ကွပါစို့။ ဒီဇာတျကားထဲမှာ မတ်ေတာတရားကပဲ အဓိကအကဆြုံးဆိုတာ ဖျောကြူးသှားပါတယျ။ Munna Bhai အဖွဈ မငျးသားကွီး Sanjay Dutt က ပါဝငျထားပွီး ဒေါကျတာ Suman Asthana အဖွဈ မငျးသမီးခြော Gracy Singh က အစှမျးပွထားပါတယျ။
အခဈြဇာတျကားကောငျးကိုမှ ကွိုကျကွတဲ့ ရုပျရှငျခဈြသူတှအေတှကျ ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)’ ကိုတော့ လကျမလှတျလိုကျပါနဲ့။ အခဈြစဈဟာ ဘယျတော့မှ မဖွောငျ့ဖွူးဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီဇာတျကားနဲ့ ထပျတူကပြါတယျ။ လနျဒနျမှာပဲ ကွီးပွငျးခဲ့တဲ့ လူငယျနှဈယောကျ။ ဥရောပတဈခှငျကို ခရီးထှကျရငျးကနေ သံယောဇဉျတှယျခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ Simran Singh ရဲ့ဖခငျက ရှေးရိုးစှဲအဖိုးကွီး။ ငယျစဉျကတညျးက သူ့သမီးကို သူငယျခငျြးရဲ့သားနဲ့ လကျထပျပေးမယျလို့ ကတိပွုထားခဲ့တယျ။ သူ့သမီးမှာ တခွားလူနဲ့ သံယောဇဉျဖွဈနတောကို ရိပျမိလတေော့ အိန်ဒိယနိုငျငံကို ပွနျပွီး သူ့သူငယျခငျြးရဲ့သားနဲ့ လကျထပျပေးဖို့ ကွိုးစားခဲ့တယျ။
ခဈြသူကို မခှဲနိုငျခဲ့တဲ့ Raj Malhotra ကလညျး အိန်ဒိယနိုငျငံကို လိုကျလာခဲ့တယျ။ ဖခငျနဲ့ ခဈြသူအကွားမှာ လှနျဆှဲနတေဲ့ Simran Singh ။ အခဈြကိုပဲ ဦးစားပေးမလား၊ ဖခငျစကားကိုပဲ နားထောငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျပါဦး။ ဒီဇာတျကားကွီးဟာ ၁၉၉၅ခုနှဈရဲ့အအောငျမွငျဆုံးရုပျရှငျကားဖွဈခဲ့ပွီး အကယျဒမီဆု (Filmfare Awards) ကလညျး (၁ဝ) ဆုခြိတျခဲ့ပါတယျ။ Raj Malhotra အဖွဈ Shah Rukh Khan က အားဖွညျ့ထားပွီး Simran Singh အဖွဈ မငျးသမီးခြော Kajol က အစှမျးပွထားပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ Shah Rukh Khan နဲ့ Kajol တို့ရဲ့နုပြိုတဲ့ရုပျသှငျကို ခံစားရမှာပါ။
မငျးသားကွီး Dharmendra နဲ့ Amitabh Bachchan နဲ့ ပူးတှဲသရုပျဆောငျထားတဲ့ ‘Sholay (1975)’ ဇာတျကားကွီးဟာ အိန်ဒိယရုပျရှငျသမိုငျးမှာ အပွောငျမွောကျဆုံးရုပျရှငျလို့တောငျ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ၁၉၇၅ခုနှဈမှာ ရိုကျကူးထားတယျဆိုပမေယျ့ ရိုကျခကျြ၊ နောကျခံတေးဂီတနဲ့ ဆကျတငျအပွငျအဆငျတှဟော ဒီနခေ့တျေရုပျရှငျလောကသားတှေ အတုယူစရာပါ။ နှဈကာလကွာမွငျ့ပွီဆိုပမေယျ့ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ မရိုးနိုငျတဲ့ရုပျရှငျစာရငျးထဲမှာ ‘Sholay (1975)’ က ထိပျဆုံးကပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ အငွိမျးစားရဲအရာရှိကွီး Baldev Singh ဟာ သူခိုးနှဈယောကျကို ရှာပေးဖို့ သူ့သူငယျခငျြးထောငျပိုငျကွီးဆီကို အကူညီတောငျးခဲ့ပါတယျ။ သူရှာခိုငျးတဲ့ သူခိုးနှဈယောကျက Veeru နဲ့ Jai ပါ။ ထောငျထဲကို ဝငျလိုကျထှကျလိုကျလုပျနတေဲ့ ဘာမထီဇာနညျဘှား။
ရဲအရာရှိကွီးက လူဆိုးခေါငျးဆောငျ Gabbar Singh ကို ဖမျးပေးဖို့ Veeru နဲ့ Jai ကို အကူညီတောငျးခဲ့တယျ။ ရူပီး ၅သောငျး ဆုကွေးထုတျထားတဲ့ Gabbar Singh ကို အရှငျဖမျးပေးနိုငျရငျ ထပျဆောငျးဆုကွေး ရူပီး ၂သောငျးပေးမယျဆိုပွီး ကမျးလှမျးခဲ့တာပါ။ ‘ငရဲဆိုတာ ခြိုနဲ့လား’ လို့ သတျမှတျထားတဲ့ သူခိုးနှဈယောကျကလညျး ရာဇဝငျလူဆိုးကွီးကို ဖမျးဆီးဖို့ ကွိုးစားပါတော့တယျ။ အငွိမျးစားရဲအရာရှိကွီးနဲ့ ရာဇဝငျလူဆိုးကွီးတို့က ဘယျလိုရနျညိုးတှေ ရှိခဲ့လဲ။ ရဲအရာရှိကွီးက ဘာဖွဈလို့ သူခိုးနှဈယောကျကို ခိုငျးခဲ့တာလဲ။ သူခိုးတှကေရော ဘယျလိုအစှမျးအစရှိနလေို့လဲ ဒီဇာတျလမျးထဲမှာ ဆကျလကျရှုစားရမှာပါ။ ‘Sholay (1975)’ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ အခြိနျဆိုတာ ကုနျလို့ကုနျမှနျးကို သိလိုကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ Veeru အဖွဈ Dharmendra နဲ့ Jai အဖွဈတော့ မငျးသားကွီး Amitabh Bachchan တို့က ပါဝငျထားပါတယျ။
မိဘနှဈပါးဟာ သားသမီးတှကေို ဆရာဝနျကွီး ဖွဈစခေငျြကွတယျ၊ အငျဂငျြနီယာကွီး ဖွဈစခေငျြကွတယျ စသဖွငျ့ပေါ့။ ဆရာဝနျနဲ့ အငျဂငျြနီယာမှ မဖွဈရငျတော့ လူဖွဈပဲ ရှုံးသလိုလို ဘဝမှာပဲ မအောငျမွငျတော့သလိုလို မွငျနတောပါ။ ဒီနခေ့တျေ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမှာလညျး “ငါ့သားက ဆေးကြောငျးတကျနတောလေ၊ ကြှနျမသမီးလေးက အငျဂငျြနီယာလောငျးလေး” စသဖွငျ့ ကွှားလုံးထုတျခငျြကွတယျ။ သူတို့ဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒတဈခုတညျးနဲ့ သားသမီးတှရေဲ့ဘဝကို ပုံသှငျးလာကွပါတယျ။
ကိုယျ့သား၊ ကိုယျ့သမီးဖွဈခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြကို အကောငျအထညျဖျောပေးရမယျ့အစား သူတို့ဖွဈစခေငျြတဲ့ ပုံစံခှကျထဲကိုပဲ ပဈသှငျးကွတာပါ။ “ငါ့သား၊ ငါ့သမီး အသကျကွီးလာရငျ ဘာဖွဈခငျြတာလဲ” လို့ မေးတတျတဲ့မိဘဆိုတာ လကျခြိုးရလေို့ ရပါတယျ။ ဒီအခကျြကို အဓိကထားပွီး ဒါရိုကျတာကွီး Rajkumar Hirani က ‘3 Idiots (2009)’ ကို ပုံဖျောခဲ့တာပါ။ မိဘဖွဈစခေငျြတဲ့ ဘဝကို ပုံဖျောမလား၊ ကိုယျ့ဖွဈခငျြတဲ့ ဝါသနာနောကျကိုပဲ လိုကျမလားဆိုတာ ဒီဇာတျကားရဲ့ အဓိကသော့ခကျြပါ။ ကြောငျးစာသငျခနျး အငှအေ့သကျနဲ့ သူငယျခငျြးသံယောဇဉျကို ခြိတျဆကျထားတဲ့အတှကျ ကြောငျးသားဘဝကို ပွနျရောကျသှားသလို ခံစားရပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျကားကွီးကိုတော့ Aamir Khan ၊ R. Madhavan ၊ Sharman Joshi နဲ့ Kareena Kapoor တို့က အားဖွညျ့ထားပါတယျ။
အကွမျးဖကျမှုတှကေတော့ နိုငျငံတိုငျးမှာ ဖွဈပကျြနကွေတာပါပဲ။ အသခေံဗုံးခှဲမှုတှေ၊ မီးရှို့မှုတှနေဲ့ သတျဖွတျမှုတှကေို လုပျကိုငျနတေဲ့ ‘Al-Shabaab’ ၊ ‘Al-Qaeda’ ၊ ‘Taliban’ ၊ ‘ISIS’ နဲ့ ‘Boko Haram’ တို့လို အစ်စလာမျစဈသှေးကွှ အဖှဲ့အစညျးတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ ‘My Name Is Khan (2010)’ ဇာတျကားမှာတော့ “ကြှနျတေျာ့နာမညျ Khan ပါ။ ကြှနျတျော အကွမျးဖကျသမား မဟုတျပါဘူး” လို့ဆိုလာတဲ့ Rizwan Khan ။ တကယျဆို Rizwan Khan က Asperger ဝဒေနာသညျ။ (သူတို့တှဟော ပတျဝနျးကငျြနဲ့ လိုကျလြောညီထှအေောငျ မဆကျဆံနိုငျပါဘူး၊ ခွတေုနျလကျတုနျနဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုခုကို ထပျခါတလဲလဲ ပွောနတေဲ့သူတှပေါ။) “လောကမှာ မကောငျးတဲ့ဘာသာဆိုတာ မရှိဘူး၊ လူကောငျးနဲ့ လူဆိုးပဲရှိတယျ သား” ဒါက သူငယျငယျတုနျးက မိခငျဆုံးမနကေစြကား။ သူ့မိခငျကှယျလှနျတာနဲ့ Rizwan Khan ဟာ Mumbai မွို့ကနေ San Francisco မွို့မှာရှိတဲ့ သူ့ညီရဲ့အိမျကို ပွောငျးနခေဲ့တယျ။
ဟိန်ဒူဘာသာဝငျဖွဈတဲ့ ကလေးတဈယောကျအမေ Mandira နဲ့ ခဈြကွိုးသှယျတော့ သူ့ညီက သဘောမတူခဲ့ဘူး။ ဒါပမေယျ့ Rizwan Khan ကတော့ လကျထပျလိုကျတာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အိမျထောငျရေးက သာယာခဲ့တယျ။ 9/11 အကွမျးဖကျမှု မဖွဈခငျအထိပေါ့။ (၂ဝဝ၁ခုနှဈ စကျတငျလာလ ၉ရကျမှာ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ကမ်ဘာ့ကုနျသှယျရေးစငျတာ (World Trade Center) ကို တိုကျခိုကျခဲ့တဲ့ ‘Al-Qaeda’ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ အိုစမာဘငျလာဒငျ (Osama bin Laden) ရဲ့ 9/11 လုပျရပျပဲဖွဈပါတယျ။ အပွဈမဲ့ပွညျသူပေါငျး ၂၉၉၇ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး လူ ၆ဝဝဝကြျော ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါတယျ။ 9/11 တိုကျခိုကျမှုဟာ အမရေိကနျနိုငျငံအတှကျ အထိနာခဲ့ပွီး အမရေိကနျဒျေါလာ ၁ဝဘီလီယံ (သနျး၁သောငျး) ကြျော ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယျ။)
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ မူဆလငျအသိုငျးအဝိုငျးဟာ တခွားဘာသာဝငျတှနေဲ့ မသငျ့မမွတျဖွဈတော့တာပဲ။ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့သားလေးဟာ အသကျဆုံးရှုံးသှားခဲ့တယျ။ လငျမယားခငျြး ကတောကျကဆဖွဈပွီး Rizwan Khan ဟာ အိမျပျေါက ဆငျးသှငျးခဲ့တယျ။ အမရေိကနျသမ်မတကွီး George W. Bush ဆီကို သှားပွီး “ကြှနျတေျာ့နာမညျ Khan ပါ။ ကြှနျတျော အကွမျးဖကျသမား မဟုတျပါဘူး” လို့ ပွောဖို့ပါပဲ။ ဒီဇာတျလမျးကွီးမှာ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈကွမလဲဆိုတာ ဆကျလကျကွညျ့လိုကျပါတော့။
အကောငျးဆုံးရုပျရှငျဇာတျကား (၅) ကားစာရငျးဟာ စာရေးသူရဲ့အမွငျနဲ့သာ ဖျောပွလိုကျတာမို့ အကွိုကျခငျြးတူရငျမှ တူမှာပါ။ ဒီစာရငျးမှာ မပါပမေယျ့ ‘Lagaan (2001)’ ၊ ‘Swades (2004)’ ၊ ‘Every Child Is Special (2007)’ ၊ ‘PK (2014)’ နဲ့ ‘Dangal (2016)’ တို့လို ဇာတျကားတှကေိုလညျး မထေ့ားလို့မရပါဘူး။ စာဖတျသူတှရေဲ့ အကွိုကျဆုံးဇာတျကားက ဘာဖွဈမလဲ။